Dad Loo Soo Qabtay Qarax Ka Dhacay Beledwayne | Gedoonline
Dad Loo Soo Qabtay Qarax Ka Dhacay Beledwayne	Added by Editor on August 17, 2012.Saved under Latest News	Muqdisho(GMN)-Gudoomiye ku xigeenka Amniga ee gobalka Hiiraan Axmed Cismaan oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa faahfaahin ka bixiyey Qarax Khasaare geystay oo ka dhacay Magaaladda Beledwayne.
Axmed ayaa hoosta ka xariiqay in Qaraxaasi ay ka danbeyeen Al-Shabaab isla markaana ay dad rayid ah oo an waxba galabsan.
Guddoomiye ku xigeenka Ammniga Hiiraan ayaa tilmaamay in qaraxaasi ay u soo qabteen dad ay ku tuhmayaan.
Marka laga soot ago hadalka Maamulka Hiiraan ayaa hadana dadka goob joogayaasha waxa ay sheegeen in qaraxa ay ku dhinteen 2-ruux oo ka agdhawaa halka uu qaraxa ka dhacay.
Qarax Miiino oo Khasaaro geystay oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho:- Qarax Khasaare gaystay Oo ka dhacay banaanka hore ee Isbitaalka Madiina.
Dad ku ba’bay qarax ka dhacay Yaqshiid
Qarax Ka Dhacay Galmudug.